Iindaba-Emva kokufunda le nto, ngaba unesibindi sokusela ikofu yonke imihla ngekomityi yephepha eligutyungelweyo le-PE?
Kubantu abaninzi, isiqalo esihle sisiqingatha sedabi. Umsebenzi wasekuseni uqala emva kwekomityi yekofu eshushu ... Ngeli xesha, icaffeine iyabophelela kwisamkeli esithile ebuchotsheni, isenza ukuba ingqondo ingakwazi ukufumana imiqondiso "yokukhathala", ke inika abantu amandla eempembelelo zamandla.
Nangona kunjalo, isifundo esitsha sikhuphe isilumkiso: ukusetyenziswa kwexesha elide kweekomityi zephepha ezilahlwayo ukusela ikofu eshushu okanye iziselo ezishushu, kubandakanya ukutya (kushushu) kwiibhokisi zasemini ezilahlwayo, kuya kuhlawula ixabiso lezempilo.
Kwisifundo esitsha esipapashwe kwiJenali yeZinto ezinobungozi》 (IF = 9.038), iqela lophando elivela kwi-Indian Institute of Technology lifumanise ukuba ikofu eshushu okanye ezinye iziselo ezishushu kwiikomityi zephepha ezilahlwayo ngaphakathi kwemizuzu eli-15 Amashumi amawaka ezinto ezinokuba yingozi. ikhutshwe kwisiselo, oko kukuthi amasuntswana eplastiki ...
Sonke siqhelene neeplastikhi ezincinci. Kwiminyaka yakutshanje, ngemveliso ngobuninzi kunye nokusetyenziswa kweeplastikhi, uxinizelelo lweeplastikhi ezincinci kwindalo esingqongileyo kuyaqhubeka ukwanda. Ungcoliseko lweplastiki oluncinci lube yingxaki yokusingqongileyo kunye nokudodobala kweozone, iasidi yolwandle kunye notshintsho lwemozulu.
Abaphandi bathi ezi plastiki zingabonakali ziphantse zibe sesoyikiso esikhulu kwimpilo yabantu. Kwangoko kulo nyaka, iqela lophando laseMelika lafumanisa iiplastikhi ezincinci kwizitho zomntu okokuqala ngqa. Abantu baxhalabile kukuba olu lungcoliseko luza kubangela umhlaza okanye ukungachumi. Izifundo zibonise ukuba ungcoliseko lweplastiki oluncinci kunokubangela ukudumba kwizilwanyana.
Umbhali kolu phononongo, uGqirha Sudha Goel, Isikolo seNzululwazi yezeNdalo kunye nezoBunjineli, i-Indian Institute of Technology, uthe: "Ikomityi yephepha ezele ikofu eshushu okanye iti eshushu iyakuthoba umaleko omncinci kule komityi kungaphelanga nemizuzu eli-15. iyakwehlisa ngama-25 000 ee-micrometer ngobukhulu. Amasuntswana akhutshelwa kwiziselo ezishushu. Umntu oqhelekileyo osela iikomityi ezintathu zeti okanye ikofu kwikomityi yamaphepha elahlwayo yonke imihla uya kungenisa amasuntswana eplastiki angama-75,000 angabonakaliyo ngeliso lenyama. "
Kuqikelelwa ukuba kunyaka ophelileyo, abavelisi beekomityi zamaphepha bavelisa malunga neekomityi zephepha ezingama-264 ezigidi, uninzi lwazo lusetyenziselwa iti, ikofu, itshokholethi eshushu, kunye nesuphu. Eli nani lilingana neekomityi zephepha ezingama-35 umntu ngamnye emhlabeni.
Ukonyuka okuqhubekayo kwenani leenkonzo zokuthatha umhlaba kuye kwaqhubela nakwimfuno yeemveliso ezilahlwayo. Kubomi obuxakekileyo nomsebenzi, uku-odola ukuhanjiswa kokutya kuye kwaba yinto yemihla ngemihla kubantu abaninzi. Iibhokisi zesidlo sasemini ezilahlwayo ziyalahlwa kude nje zakugqitywa ukusetyenziswa, kwaye ngokubanzi azinampembelelo imbi kwindalo njengeplastikhi kunye nezikhongozeli zesitrofoo. Nangona kunjalo, uSudha uthe, oku lula kuza ngexabiso.
"Abaphandi bongeze ngelithi:" Iiplastikhi ezincinci zisebenza njengezinto ezithwala ukungcola, njenge-ion, isinyithi esinetyhefu enzima efana ne-palladium, i-chromium kunye ne-cadmium, kunye ne-organic compounds ezi-hydrophobic kwaye ezinokungena kubukumkani bezilwanyana. Iziphumo zempilo zinokuchaphazeleka. Zibi kakhulu. "
Indlela ethe-ethe yokwahlula amachiza ichonge iiplastiki ezincinci emanzini ashushu. Eyona nto iphazamisayo, uhlalutyo lwefilimu yeplastiki lubonakalise ubukho besinyithi esinzima.
Uyabona ukuba ezi ziphumo zovavanyo zilapha ngasentla ziyothusa, ke ngaba kukho nayiphi na imveliso enokutshintsha iikomityi zephepha ezenziwe nge-PE?
Impendulo nguewe wethu Iikomityi zephepha ze-EPP, Ibhokisi yesidlo sasemini ye-OPB uthotho, njl. Beka phambili ukwenza umgquba, qaphela ukusetyenziswa kwakhona kwezixhobo kwaye usebenzise iplastiki ekhuselekileyo nenobuhlobo. Iikomityi zephepha eziveliswe ngayo zinokutshintsha ngokugqibeleleyo iikomityi zephepha ezenziwe nge-PE.